25 Zviratidzo Unogona Kuva Nechinetso Kubhuroka | Martech Zone
25 Zviratidzo Unogona Kuva Nechinetso Kubloga
Mugovera, Kubvumbi 14, 2007 Mugovera, Kukadzi 18, 2017 Douglas Karr
Akafuridzirwa BittBox's inonakidza posvo, Ndakafunga kunyora yangu yega nezve rangu dambudziko blogging. Heano zviratidzo zvangu makumi maviri neshanu zvekuti iwe ungave uine dambudziko blogging.
Shamwari dzako dzepedyo dzinoziva nzira yakapusa yekutaurirana newe nekutumira komendi.
Iwe unorongazve imba yako yekutandarira kuti uwane mukana uri nyore pakombuta.
Kuti upindure mimwe mibvunzo, iwe dzimwe nguva unofanirwa kutsvaga yako blog.
Iwe unyorera zvinyorwa kune yako mhuri pane kutaura navo.
Iwe unobhadhara yako DSL kana Cable bhiri usati wabhadhara kana kuti mogeji.
Iwe hauzive yako yekuyeuka asi iwe unoziva yako Technorati chinzvimbo.
Kuchenesa khibhodi yako kwaizopa vaongorori vezve forensic nezvawakange uchidya kwemwedzi mitanhatu yekupedzisira.
Kana iwe usingakwanise kufunga maitiro ekugadzirisa yako theme, unonyora yako wega WordPress Plugin.
Iwe wakaziva Anna Nicole Smith akafira online.
Iwe wakasunungurwa neiyo WordPress 2.1 autosave ficha nekuti iwe unogona pakupedzisira kutora mabhawa ekugezera paunenge uchitumira.
Iwe unogamuchira mablogi eshamwari, mhuri, uye vatinoshanda navo.
Iwe unotenga mazita emadunhu ezvipo.
iwe vane a mugove of shamwari kuti iwe haana chaizvoizvo akasangana nor Akataura to in zvechokwadi Upenyu.
Iwe unonzwisisa mazita akafanana IMHO
Iwe unobvunza a Herman Miller Aeron yezuva rako rekuzvarwa.
Unozviwana wava kuda an iPhone kunyangwe iwe usati wakambove neMac muhupenyu hwako.
Paunobvunzwa zvaunoda kuti udye, iwe unokurudzira a restaurant muVancouver kubva kuna John Chow - asi iwe unogara muIndiana.
Chero bhurogu isina makomendi inoyamwa… kunze kwe Seti Blog.
Unoziva Ze zvinosetsa, Hugh inokwevera ma comics makuru pamakadhi ebhizinesi, uye maka Chaizvoizvo, aive nerombo rakanaka nebhizinesi rake rekutanga.
Iwe unoziva kuti chero mhinduro kubva kune saiti inopera mu "info" ndeye blog spam.
Iwe unotarisira mberi kune dingindira idzva kupfuura kutamira mumusha wako mutsva.
Unonetseka kurara usina kutumira.
Iwe unongogara chete kumahotera ane Broadband kana ine Starbucks mukati memabhuru matatu.
Iwe unozvizivisa pachako seblogga pane iro chairo basa raunoita raramo pariri.
Kuraira kudya kwemanheru kunosanganisira ctrl-t uye kupinda mukati ku Papa John's.
Mitemo Yangu Mitatu paRace, Chitendero, Zvematongerwo enyika, Bonde uye Bigotry
Dzvanya Webhu Analytics
Apr 14, 2007 pa 8: 18 PM
Runyoro runonakidza asi ndakawana zvikanganiso zviviri.
Chekutanga chikanganiso chiri ne#13 sekunge tisina kumboonana pachedu, takataura kakawanda izwi.
#16, iwe ikozvino wava neMac, saka izvi hazvishande kwauri 🙂
Kana iri #20, ndakagamuchira zvirevo kubva ku.info saiti izvo zvanga zvisiri zveblog spam…
#23, kwete chikanganiso asi ini ndawana mamwe mahotera kuti ave nebroadband uye kushandira Starbucks mukamuri yekutandarira kana munzvimbo iyo vane madhonati emahara 🙂
Apr 14, 2007 pa 8: 19 PM
Kukanganisa? Kunyomba! Unoda kuseka zviri nani, Sean. 🙂
Apr 14, 2007 pa 8: 28 PM
Ndine pfungwa yekuseka Doug… hehe… madhongi emahara uye Starbucks mumutsara mumwe chete? Huya izvozvi, ndiwo mutambo 🙂
Apr 14, 2007 pa 9: 07 PM
Phew! Ndatenda nekubatanidza pa#13, kunyangwe ndichikodzera vamwe.
Mhosva? Izvi pazvakauya mumafeeds angu - ndakafunga, "uh-o-o-... ndabatwa." Mushure mekuverenga iyo positi, wakandiziva nguva yese :-)
Ndatenda nekuseka (uye hushamwari).
Apr 14, 2007 pa 9: 35 PM
Zvinosuruvarisa kuti zvingani zveizvi zvinoshanda muhupenyu hwangu ...
Apr 14, 2007 pa 10: 16 PM
#26: Iwe unonyora zvinyorwa zvakananga kuLinganisa-bait mamwe mablogger kuti abatanidze newe 🙂
Apr 14, 2007 pa 10: 17 PM
Chokwadi, Kiltak! 🙂
Apr 15, 2007 pa 2: 00 AM
9 kunze kwe25 kwandiri… pachine tariro.
Iwe unozviwana iwe uchida iPhone kunyangwe iwe usina kumbobvira uine Mac muhupenyu hwako.
Izvo zvishoma nezvekuva blogoman uye zvimwe nezve kuve wakarumwa neakanakisa Applemarketingbug. (Chaizvoizvo, pese Steve Jobs paanoita mharidzo, iwe unongodaro vane kuva nazvo. Kune vapepeti: nhasi Apple icharatidza iyo itsva Final Cut Pro. 🙂
#27 unotarisa bhurogi rako kuti uwane makomendi kakawanda kupfuura mbozhanhare yako
#28 unoziva kuti ndeipi vhezheni yeWord Press ndiyo yakanyanya kuitika. Uye kana iwe uchimhanyisa bhurogi rako pane yekare vhezheni, unogona kukakavara kwemaminetsi kuti sei…
Iva neSvondo yakanaka, shamwari yangu chaiyo 🙂
*Ndichiseka hangu ndichishaya kuti mangani emitemo iyi yandinoshanda
Apr 15, 2007 pa 9: 08 AM
#27 ndeyechokwadi neni! Zvakanyanya kusetsa!
Apr 15, 2007 pa 2: 07 AM
#29 iwe unoratidzika semumwe wevanotaura pamusoro pamablog akawanda.
Apr 15, 2007 pa 3: 16 AM
Zvakanaka Doug! Heino imwe yako: 10 Nzira dzekuziva kana Iwe uri Blogaholic.
Apr 15, 2007 pa 9: 10 AM
Bloke - izvo zvinoshamisa! Uye ndakagara pano ndichiverenga zvakataurwa ndisati ndagadzira kofi yangu yemangwanani… oy!
Apr 15, 2007 pa 2: 20 AM
#30 akawandisa mapositi kana makomendi anouya panguva inotanga na0
#31 Iwe uchiri kunyoresa kuRSS feed mushure memwedzi mitatu yekusaita basa. 🙂
Apr 15, 2007 pa 6: 07 AM
Mazhinji acho anondishandisira, ibheji randinopfeka nekudada.
Apr 15, 2007 pa 9: 59 AM
Ndine mhosva zvakanyanya nezve 1/3 yeizvi! Pane here nhanho gumi nembiri chirongwa chandinogona kunyoresa?
Apr 15, 2007 pa 12: 10 PM
@Thor: Chaizvoizvo, Doug ari mukati mekugadzira nhanho gumi nembiri chirongwa cheizvi asi muWordPress plugin fomu saka zvichave nyore kune isu tese takapindwa muropa 🙂
Apr 15, 2007 pa 12: 14 PM
Rondedzero Yakanaka Doug, handitende kuti mumba mangu mune kamera! Ndiri kutsoropodzwa ndinokuudza!
Apr 15, 2007 pa 2: 51 PM
Hongu, Doug. Zvaitonyanya kusekesa kana ikasarova pedyo nepamba apa.
Apr 16, 2007 pa 12: 44 PM
Saka zvakanaka. Saka zvinosetsa.
Ini handisi kungonyora izvo, ndiri chaizvo LOL !!!
Apr 18, 2007 pa 4: 25 AM
Ndakapasa. Gumi nematatu pamakumi maviri neshanu haashande kwandiri 🙂
Nov 16, 2009 na5:41 AM
Ini ndanga ndichitsvaga saiti inotaura zvakawanda nezve blogging uye kuona saiti ino, ndinofarira kuverenga iyo 25problems uye ndichaedza kudzivirira iwo dambudziko uye kuti ndirege kuona zvichaitika.